Ergeyga Q/Midoobay u magacawday Geeska Afrika oo Muqdisho ka dhoofay, isagoo aan la kulmin Madaxweyne Farmajo | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Q/Midoobay u qaabilsan Geeska Afrika Parfait Onanga-Anyanga ayaa ka dhoofay magaalada Muqdisho, kadib socdaal qaatay laba maalmood, isagoo la kulmay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka.
“Waxaan arki karnaa tirooyin badan oo horumar oo la meel dhigay. Waxaa jira rajo, waloow ay caqabado badani jiraan, iskama caabbin karaan dadaallada wadareed ee Beesha Caalamka,” ayuu yiri Ergayga QM u qaabilsan Geeska Afrika Parfait Onanga-Anyanga oo rajo ka muujiyey Xaaladda Soomaaliya oo ku howlan geeddi socod muhim ah oo doorasho.
Kulamada Mr. Onanga-Anyanga ayaa waxaa ka mid ahaa mid uu la qaatay Ergayga Geeska Afrika ee Somalia, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, Balal Mohamed Usman, kaasoo uu kala hadlay muhiimadda wada xaajood horumar gobolka ka dhaliya.
Ergayga ayaanay u suuragelin inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaaraha, iyadoo taas bedelkeed loo diray so dhoweyntiisa iyo la-kulankiisa Ergeyga Madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka.
Goor danbe, wuxuu Mr Onanga-Anyanga la kulmay Guddoonka Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Ibraahim, oo uu kala sheekaystay caqabadaha iyo fursadaha ku aaddan doorashooyin daah furan oo “qof iyo cod ah” oo dalka ka dhaca.
“Doorashooyinku waxay noqon karaan dib u heshiisiin qaran, balse waxay sidoo kale gacan ka gaysan karaan khilaaf dhaca, sidaa darteed, geeddi socodka doorashada waa inay taageertaa QM,” ayuu yiri Ergaygu.
Mr Onanga-Anyanga ayaa sidoo kale la hadlay wakiillada ururrada Bulshada Rayidka, si hoosta looga xarriiqo siyaasad ay door ka ciyaaraan haweenka iyo dhallinyaradu. Wuxuu sidoo kale ku boorriyey inay iskaashi la yeeshaan QM maadaama howlo badan oo ay qabtaani ay asaasi u yihiin shaqada QM.
Previous articleXOG: 5 Qodob oo sababay inuu Madaxweyne Farmaajo ka tanaasulo sharcigii Doorashada ee uu watay (Akhriso)
Next articleAKHRISO: Magacyada Musharixiinta u taagan xilalka Guddoonka Baarlamanka Cusub ee Galmudug